Thabo Mbeki tamin' ny taona 2002
I Thabo Mbeki, teraka tamin' ny 18 Jona 1942, dia mpitondra fanjakana tao Afrika Atsimo, mpikambana tao amin' ny African National Congress (ANC) izay notarihiny tamin' ny taona 1997 hatramin' ny 2007, ary lasa filohan' ny Repoblika tamin' ny 16 Jona 1999 hatramin' ny 24 Septambra 2008, nandimby an' i Nelson Mandela.
1.1 Filoha lefitr' i Afrika Atsimo
1.2 Filohan' i Afrika Atsimo
Filoha lefitr' i Afrika Atsimo[hanova | hanova ny fango]
Tamin' ny taona 1994, rehefa nandresy ny ANC tao amin' ny Antenimieran' i Afrika Atsimo tamin' ireo fifidinana voalohandohany nandraisan' ny besinimaro anjara, i Thambo Mbeki dia lasa filoha-lefitr' i Afrika Atsimo, niaraka filoha lefitra taminy koa i Frederik de Klerk fa i Nelson Mandela kosa no filoham-pirenena afrikana tatsimo. Tamin' ny taona 1996, rehefa nametra-pialana i Frederik de Klerk sy rehefa rava ny National Party (NP) an' ny governemanta, i Thambo Mbeki dia lasa filoha lefitra tokan' i Afrika Atsimo nanampy ny filoham-pirenena Nelson Mandela, izay namindrany ampahany be amin' ny fahefany mpanatanteraka. Lany ho folohan' ny ANC izy tamin' ny Desambra 1997. Tamin' izany fotoana izany ihany dia napetrany tamin' ny toerana manan-danja indrindra rehetra teo amin' ny fitondrana sy ny fanjakana ireo mpanara-dia azy (banky foibe, hetra, fahitalavi-pirenena, etamazôron' ny tafika).
Filohan' i Afrika Atsimo[hanova | hanova ny fango]
Tamin' ny volana Jona 1999 i Thambo Mbeki dia voafidy ho filohan' ny Repoblika ka nandimby an' i Nelson Mandela. Nisafidy an' i Jacob Zuma ho filoha lefitra izy. Tamin' ny taona 2005, tamin' ny naha filoham-pirenena azy fanindroany, dia nesoriny i Jacob Zuma, noho ity farany voarohirohy tamin' ny kolikoly momba ny fifanarahana momba ny fampitaovam-piadiana mitentina 3 700 tapitrisa euro (natsahatra ny fanennjegana ara-pitsarana tamin' ny Avrily 2009). Niteraka fivakisana teo amin' ny ANC izany.
Lany indray i Thambo Mbeki tamin' ny Avril 2004 sady nafazo ny maro anisa tao amin' ny Antenimiera izay nitombo vokatry ny fanakambanana ny New National Party (NNP) aminy.
Tamin' ny taona 2007 dia nanambara tamin' ny Antenimiera roa tonta i Thambo Mbeki fa nanapa-kevitra ny amin' ny famptsoran-keloka homena ireo nanao heloka bevava ara-pôlitika teo anelanelan' ny taona 1994 sy 1999, ka tsy hisy ny fihaonan' ny olo-meloka amin' ireo nanaovana heloka.
Fametraham-pialana[hanova | hanova ny fango]
Nahiahin'ny mpitsara ny raharaha-na kolikoly momba an' i Jacob Zuma, amin' ny fomba ankolala momba ny fitsabahana ara-pôllitika i Thambo Mbeki, ka nanambara ny fametrahany fialana tamin' ny 21 Septambra 2008, taorian' ny nanendahan' ny antokony azy. Nanendry ny filoha lefitry ny antoko, Kgalema Motlanthe, ny ANC mba handimby azy eo amin' ny maha filoham-pirenena azy. Tamin' ny 23 Septambra, tamin' ny alalan' ny vato miisa 299 amin' ny 309 dia nankatoavin' ny solombavam-bahoaka ny fametrahan' i Thambo Mbeki fialana ka nihatra izany tamin' ny 25 Septambra 2008. Nametra-pialana koa ny filoha lefitra, ramatoa Phumzile Mlambo-Ngcuka, ary ny 11 amin' ireo minisitra tao aminy, ka isan' izany i Trevor Manuel sy i Patrick Lekota. Niaraka tamin' izany koa i Thambo Mbeki dia namoha indray ny fitoriany an' i Jacob Zuma teo amin' ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana. Nitory i Thambo Mbeki satria nihevitra fa nanala baraka azy ny valin' ny fitsarana nivoaka teo aloha amin' ny maha olona tsotra fotsiny azy na amin' ny maha filoham-panjakana azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Thabo_Mbeki&oldid=1040012"
Voaova farany tamin'ny 17 Novambra 2021 amin'ny 04:14 ity pejy ity.